Zo tsy azo henjehina Maika hahazo izany ny ankamaroan`ireo kandidà depiote
Amin’ny alatsinainy 27 mey ho avy izao, ny olom-pirenena dia hifidy solombavambahoaka 151 amin’ny kandidà 820. Hita ao daholo na ny indrakindrafana na ny tampohin-karena na ny mpanararao-paty…, hoy ny SeFaFi.
Ny ankamaroan`ireo kandidà dia voarohirohy amina afera maloto raha atao bango tokana. Maika hisitraka ny zo tsy azo henjehina (privilege de juridiction) fotsiny ve ireo kandidà ? Fahefana manokana omena ireo mpitondra fanjakana ambony na fahefana mpanatanteraka toy ny filoham-pirenena, lehibena andrimpanjakana, olom-boafidy na mpiasam-panjakana ambony izy io. Tsy midika akory fa tsy azo henjehina ara-pitsarana fa noho maha saropady ny asany dia amin`ny fomba manokana no ahafahana manenjika azy. Inona no tena mason-tsivana nandritra ny fandraisana ireo antontan-taratasim-pifidianana ? “Ny fitsarana dia efa niteny fa tokony hasiana mason-tsivana ny fanekena antontan-taratasy firotsahan-kofidiana. Anisany ny fahadiovana ara-pitsarana”, hoy i Imbiky Herilaza. Ahoana no hirosoana any amin`ny fifidianana nefa ny 50%-n`ireo kandidà no tsy manana fahatsiarovan-tena ? Tsy voajery ireo voarohirohy ara etika sy moraly. Io no tokony hitondrana azy satria ny depiote dia tokony ho fitaratra.